I-China Mineral Fiber Ceiling BC004 ifektri kanye nabakhiqizi | Beihua
Umklamo webhodi yamaminerali ungathuthukisa ukusetshenziswa kwemithombo yokukhanya engaqondile, uthuthukise ukusebenza kahle kokukhanyisa kohlelo lonke lokukhanyisa, unciphise ukugqama namathunzi, futhi wenze umbono ukhululeke kakhudlwana.
Isebenzisa uvolo wamaminerali njengowumbumbi wokukhiqizwa oyinhloko, uboya obunamaminerali buye bathuthukisa ama-micropores ukunciphisa umsindo wokuhanjiswa kwegagasi, ukuqeda i-echo, futhi bahlukanise nomsindo odluliselwa phansi.
I-NRC esebenza kahle yokutholwa kwemisindo ingaphezulu kwe-0.5, engakhuthaza ukusebenza kwesakhiwo, ithuthukise indawo ethokomele yesakhiwo, futhi ithuthukise ikhwalithi yempilo yabantu. Ilungele amaphrojekthi wobungcweti afana nezakhiwo zamahhovisi, amahhotela, izibhedlela, amabhange, izinkantolo, izikole nezinye izikhungo, amakhorali womphakathi, amasheya aphezulu, amahholo amabhizinisi, izigceme, amagumbi okusebenzela, amagumbi okusebenzela enkantolo namanye amaphrojekthi ochwepheshe, kanye namakamelo okwamukela kuwo, amahhovisi, amakamelo ezinkomfa kanye nezinye izindawo umhlobiso omkhulu.
I-NRC eyenzelwe ukuncipha komsindo iyinkomba yokuhlola ebanzi ekala amandla okufaka umsindo wezinto ezithile endaweni evaliwe. Ukuphakama kwe-NRC, lapho umsindo ukhonjiswa kancane emuva esikhaleni. Ngokuphambene nalokho, umsindo uhlala uboniswa esikhaleni sokwenza i-reverberation, nomphumela odonsa umsindo wasemuva. Ngenxa yokuqonda kwendlebe yomuntu, kuphela uma i-NRC ifinyelela ku-0.5 noma ngaphezulu, izindlebe zomuntu zingazizwa zinciphisa umsindo. Uvivinyo luye lwabonisa ukuthi imizimba edonsa umsindo exubayo, njengamaphaneli oboya obumunca amaminerali, namaphaneli wensimbi anezingqimba ezingemuva ezithinta umsindo anokulinganisa okuphakathi kokuthola umsindo. Amapaneli angena ngomsindo anjenge-non-porous gypsum board, i-calcium silrate board nebhodi lensimbi cishe akunawo umphumela odonsa umsindo. Amapaneli agxisha imisindo ekhipha umsindo onjengamabhodi e-gypsum enziwe ngefreyimu awenzi kahle ngemisindo emincane kakhulu.
I-NRC yokwehlisa umsindo ibaluleke kakhulu kunoma yisiphi isikhala esifihliwe. Isikhathi sokubuyiselwa kabusha nenani lomsindo kudingeka libhekwe kulezi zindawo ezilandelayo:
Kuvaliwe ihhovisi, igumbi lokuhlangana
Imvelo evulekile / evaliwe yehhovisi
Lobby, indawo yokusebenza
Ikilasi / imvelo yokufunda, indawo yokuzivocavoca, indawo yokudlela
Indawo yezokwelapha, enjenge: ihholo lokwamukela, igumbi lokubonisana, ihhovisi lodokotela, njll.
Imvelo yokuthengisa, enye imvelo yenkonzo yamakhasimende, njll.
Esedlule: Amaminerali Fiber Ceiling BH003
Olandelayo: Amaminerali Fiber Ceiling BH002